MAXAY TAHAY PERGOLA IYO SABABTA LOOGU BAAHAN YAHAY GOOBTA? - WARARKA
Pergola - dhisme gaar ah beerta. Ereyga waxaa laga soo qaatay luqada Talyaaniga, halkaas oo macnaheedu yahay "kordhin" ama "dhismo".
Waxaa loo samayn karaa sidii dhismo gooni ah ama si loo kordhiyo dhismaha weyn. (tusaale, jikada guriga ama jikada).
Pergola - wax u dhaxeeya taageerada qashinka ah ee looxyo iyo qalab beerta.
Waxaa laga sameeyaa soo celinta waxyaabaha (tusaale ahaan, godadka ama tiirarka) oo ku xiran baararka cirifka.
Dhismaha oo dhan waxaa lagu daboolay dhirta.
Maxaan ugu baahanahay pergola?
Pergola ayaa qaban kara hawlo kala duwan..
Waxay u adeegi kartaa taageero aad u fiican oo ku saabsan dhirta fuulitaankaaga.
Waxay si fiican u ilaaliyaan qoraxda.
Ku habboon abuuritaanka aag yar oo madadaalo ah.
Waa quruxda weyn ee beertaada.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad fahamto waxa aad u baahan tahay dhismahaas. Waxaa jira noocyo kala duwan oo pergolas ah, laakiin dhammaantood waxay leeyihiin hal shay oo caadi ah: Dhismahan oo kale waa inuu noqdaa mid la mid ah dhirta.
Sidaas, noocyada dhismaha sida:
Shiraac. Pergola ee noocaan ah wuxuu si toos ah u dhisi karaa dhismaha, inkastoo aysan taasi muhiim ahayn. Qeybtaan waxaad ka dhigan kartaa goob cayaareed ama waxaad halkaas ku dhejin kartaa baabuur. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa halkii laga cuni lahaa, tusaale ahaan, in uu halkaa ku cuno xilliga xagaaga. Dhibaatada kaliya - pergola si xun ayaa looga ilaaliyaa roobka. Laakiin waxay abuurtaa iftiin iftiin leh oo dabayshaana xitaa dabaylka ugu degan, taas oo aad u fiican inta lagu jiro kuleylka xagaaga.
Screen. Pergola waa mid ku habboon rakibida xayndaabka, sidoo kale wuxuu u fiican yahay qaybtaada beertaada ee meelaha.
Visor. Noocan ah pergola waxaa laga amaahan karaa koonfureed: xayawaan yar yar, oo ku baxa cagaarka, si fiican u iftiimaya daaqadaha, ka ilaalinta cadceedda.
Tunnelka. Pergola oo noocan ah ayaa badanaa lagu dhisaa waddada si loo qurxiyo oo loo qariyo dhismayaasha. Waxay ka kooban tahay dhawr meelood oo dhejis ah oo lagu dhejiyo rodoos.
Waxaa jira xeerar dhowr ah oo la raacayo marka la samaynayo pergola..
Qalabka iyo naqshadeynta pergolas waa in lagu daraa qaabka uu yahay goobta aad qurxisay.
Alwaax qurux badan waa in ay u ekaataa mid sahlan, iyada oo aan loo eegin waxa laga sameeyay.
Dhismuhu waa inuu ahaadaa mid lagu dhejiyo barta internetka ee cabbirka.
Dhismo adag ayaa loo baahan yahay oo u adkeysan kara miisaanka dhirta.
Dhismaha noocan ah wuxuu leeyahay dabayl aad u weyn, sidaa daraadeed waa inuusan ka sarraynin 2.5 m Ka hor inta aanad geynin pergola, waxaad u baahan tahay inaad ogaato meesha ay tahay dabaylaha inta badan ku duulaya, iyo gobollada gaar ahaan dabaysha guud ahaan ma ahan kuwo ammaan ah in la dhiso pergola.
Pergola waa inay u muuqataa qurux badan xitaa jiilaalka marka aan la dabooli doonin caleemaha.
Pergola alwaax waa in si joogto ah loola dhaqmaa antiseptic si looga hortago qoyaanka xad dhaafka ah ee u waxyeeleeya. Qalabka biraha waxaa sidoo kale loo baahan yahay in laga ilaaliyo dhoobada.
Waxaad dhisi kartaa pergola naftaada bilowga ilaa dhamaadka, waxaad ka soo ururi kartaa qaybaha lagu iibsaday dukaanka, ama waxaad si buuxda ugu kalsoonaan kartaa dhismaha udugga. Waxa ugu muhiimsan waa inaad jeceshahay oo aad ku dareyso naqshadeynta beertaada.